ထိုနေ့၏စပမ် | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဖေဖေါ်ဝါရီလ 23, 2007 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ SPAM စစ်ထုတ်စက်များနှင့်တောင်မှကျွန်ုပ်သည် SPAM ကိုရရှိသည်။ SPAM ကိုကျွန်ုပ်မုန်းပါသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် SPAM ကိုစူးစမ်းလေ့လာစဉ်ကျွန်ုပ်၏အပြစ်ရှိသည့်အပျော်အပါးများထဲမှတစ်ခုကိုအချို့ဝန်ခံတတ်ပါသည်။ မှန်ကန်သောမှတ်ချက်များပါသောစစ်ထုတ်မှုမှဖမ်းမိသောအရာများကိုခွဲခြားသိနိုင်ရန်ကြိုးစားရန်ကျွန်ုပ်ချက်ချင်းစစ်ဆေးသည်။ တစ်ခါတလေတော့ငါဟာကျောက်မျက်အနည်းငယ်ကိုဖြတ်ပြီးစကင်ဖတ်တယ်။
ဟယ်လို။ အလွန်ကောင်းတဲ့ website ကိုငါ့ချီးမွမ်း။ မင်းရဲ့ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကြောင်လေးကိုတွေ့ဖို့မင်းအတွက်အချိန်အများကြီးရှိတယ်။ မွေးမြူရေးအတွက်အောင်မြင်မှုအများကြီး။
Technorati ကိုသုံးခြင်း API ကို နှင့် PHP
23:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 06 တွင်
အံ့မခန်း။ ငေါက်ခနဲ အောင်ပွဲခံသည်! ခြေထောက်လေးချောင်း ဘဲတစ်ကောင်ရဲ့ စွမ်းအားကို ဘယ်တော့မှ လျှော့မတွက်ပါနဲ့။
Btw၊ မင်းရဲ့ "ချစ်စရာကောင်းတဲ့ကြောင်" နဲ့ လာရောက်လည်ပတ်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
23:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 11 တွင်
မင်းလည်း ကြောင်မွေးတယ်။ မင်းက အံ့ဩစရာပဲ။ ဘယ်အချိန် အိပ်လဲ 😉
23:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 8, 28 တွင်
ဟီးဟီး။ Stumpy အကြောင်း တစ်စုံတစ်ယောက်မှ သိချင်နေပါက၊ ၎င်းသည် zefrank ၏ မကြာသေးမီက ကိုးကားချက်ဖြစ်သည်။ အိပ်ရာဝင်ချိန်ပုံပြင်.
Zefrank သည် ကျွန်ုပ်၏ အပြစ်အနာအဆာများထဲမှ အခြားတစ်ခုဖြစ်သည်။
24:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 2, 16
မင်းရဲ့ မွေးမြူရေးဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်တွေကို မျှဝေဖို့ ဂရုစိုက်သလား။
ဒါဆို မင်းဘာလုပ်မလဲ။ အခန်းထဲမှာထား၊ သော့ခတ်ထားလိုက်၊ တစ်နေကုန် ပြန်လာပါ bam၊ ချစ်စရာကြောင်လေး ၁၀ ကောင်က မင်းကို စိုက်ကြည့်နေတာလား။ 🙂
24:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 8, 57
ရယ်စရာကောင်းလွန်းတယ်။ ကျွန်တော့်အိမ်မှာ တခြားသက်ရှိတိရစ္ဆာန်တွေကို ခွင့်မပြုတဲ့ Jack Russell တစ်ကောင်ရှိတယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး သားကောင်ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ငှက် Ozzy ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နောက်ထပ် သားကောင်ကတော့ ငါ့သမီးအတွက် ဝယ်ထားတဲ့ ငါ့သား Gerbil ပါ။ သူသည် မုဆိုးဖြစ်သည်… စိတ်ရှည်သည်းခံပြီး စိတ်ဓါတ်ကျသည်။ ဒါတောင် ငါတို့က သူ့ကို ချစ်နေတုန်းပဲ။
26:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 9, 04
အချို့သော SPAM မှတ်ချက်များသည် ရယ်စရာဖြစ်နိုင်သည်။ သင်္ချာမှတ်ချက် spam ကာကွယ်မှု ပလပ်အင်များထဲမှ တစ်ခုကို သင်အသုံးပြုပြီးပြီလား။ ၎င်းတို့ကို SPAM ပိတ်ဆို့ရာတွင် အလွန်ထိရောက်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
သင်္ချာမှတ်ချက် Spam Plugin ။